Blockchain Wallet. Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum 6.24.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 6.24.0 လြန္ခဲ့ေသာ3ပတ္က
Application မ်ား ေငြေရးေၾကးေရး Blockchain Wallet. Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum
Blockchain Wallet. Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
**** သာကန့်သတ်အချိန်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ AirDrop program နဲ့အခမဲ့ crypto ရ! သင့်ရဲ့ပိုက်ဆံအိတ် Create နှင့်သင့်ပရိုဖိုင်းကိုဖြည့်စွက်ဖို့ညွန်ပြချက်များကိုလိုက်နာ, ကြှနျုပျတို့ကုန်သွယ်စတင်အခမဲ့ကြယ် (XLM) ၏အမေရိကန်ဒေါ်လာ $ 25 AirDrop ပါလိမ့်မယ်။ ရရှိနိုင်လူတစ်ဦးရှိရာတစ်ဦးလျှင်တစ်ဦးမှကန့်သတ်။ ****
အဆိုပါ Blockchain ပိုက်ဆံအိတ် 140 နိုင်ငံ transacted $ 200B အတွက်သန်း 34 ကျော်ပိုက်ဆံအိတ်နှင့်အတူလူကြိုက်အများဆုံး crypto ပိုက်ဆံအိတ်ဖြစ်ပြီး, စက်မှုလုပ်ငန်းအနိမ့်အဖိုးအခကိုဦးဆောင်။ က Non-ချုပ်နှောင်ထားသောကွောငျ့, သင်၏ Blockchain ပိုက်ဆံအိတ်ထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်သာသင်ကသင်၏ crypto မှဝင်ရောက်ခွင့်ကိုထိန်းချုပ်သော private keys တွေကိုကိုင်ထားဆိုလိုသည်။ တဖန်သင်တို့အစဉ်အဆက်သင်၏အပိုက်ဆံအိတ်၏လုံခြုံရေးထွက်ခွာခြင်းမရှိဘဲ send and receive, လဲလှယ်သိုလှောင်နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ Blockchain ပိုက်ဆံအိတ်လက်ရှိ Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin ငွေ (BCH), ကြယ် (XLM) နှင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ Pax ဒစ်ဂျစ်တယ်ဒေါ်လာ (PAX) ကိုအထောက်အပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။ နယူး, စိတ်လှုပ်ရှားစရာပိုင်ဆိုင်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုရွေးချယ်ရေးနည်းစနစ်ဆန့်ကျင်အကဲဖြတ်ထားတဲ့မှန်မှန်ထည့်သွင်းထားပါသည်။
ဒီနေရာတွင်အသစ်ရဲ့ Blockchain ပိုက်ဆံအိတ်နှင့်အတူတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဘယျသို့င်:
စျေးကွက်များမှ Access ကို
* ချောမွေ့စွာသင့်ရဲ့ပိုက်ဆံအိတ်၏ဘေးကင်းမှုကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ, အကောင်းဆုံး-In-class ကိုလဲလှယ်နှုန်းနှင့်အတူအခြားအဘို့ကိုဝယ်ခြင်းနှင့် 36 နိုင်ငံများနှင့်လဲလှယ်တဦးတည်း crypto အတွက် Bitcoin ရောင်း။
သူတို့ Off-ကွင်းဆက်အရောင်းအထက်ပိုပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်လိမ်လည်မှုခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့် * အားလုံးဖလှယ်မှု On-ကွင်းဆက်အခြေချ
* သာလျှင်သင်သည်သင်၏ private keys တွေကိုနှင့်သင့် crypto မှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။
* Set 4-ဂဏန်း-pin ကိုသို့မဟုတ် biometric authenticate
* အဆင့်မြင့် Two-factor authentication နှင့်အတူလူဆိုးထွက်သိမ်းဆည်းထားပါ
* သင့်ရဲ့ထူးခြားတဲ့ 12 စကားလုံး backup လုပ်ထားထားသောစာပိုဒ်တိုများနှင့်အတူ backup လုပ်ထားနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးရိုးရှင်း။
တိုးမြှင့်ငွေပေးငွေယူသီးသန့်တည်ရှိမှုအဘို့ * hierarchical တွက်ချက်လိပ်စာဗိသုကာ
TOR ကို Block
အများဆုံးကျပန်းများအတွက် * Server ကိုဘက် entropy
* ကမ္ဘာပေါ်မှာမည်သူမဆိုမှချက်ချင်း Bitcoin, Ethereum, Bitcoin ငွေနှင့်ကြယ် Send
လွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူ cryptocurrencies အတွက် * တောင်းဆိုခြင်းငွေပေးချေမှု - ဘယ်နေရာမှာမဆိုအချိန်မရွေး။ (QR Code ကိုထောက်ခံကြောင်းလည်းပါဝင်သည်)
* ရိုးရိုး, နားလည်ရန်လွယ်ကူလဲလှယ်ရေး interface ကို crypto ပျော်စရာနှင့် frictionless အတွေ့အကြုံကိုဖလှယ်စေသည်။
* ဂလိုဘယ်ပိုက်ဆံအိတ် 21 ဘာသာစကားများထောက်ခံပါတယ်။
ဒီ app နှင့်အတူ, သငျသညျသစ်တစ်ခု Blockchain ပိုက်ဆံအိတ်ဖန်တီးသို့မဟုတ်သင့်မိုဘိုင်း device ပေါ်တွင်သင်၏လက်ရှိက်ဘ်ပိုက်ဆံအိတ်တွဲနိုင်ပါ။ အခမဲ့ယနေ့ Download နှင့်သင်မေးခွန်းများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံး-In-class ကိုထောက်ခံမှုအသင်းကိုသင်ကူညီစောင့်နေသည်: support.blockchain.com သို့မဟုတ် twitter များမှတဆင့် - @AskBlockchain ။
Blockchain Wallet. Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Blockchain Wallet. Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Blockchain Wallet. Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Blockchain Wallet. Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum အား အခ်က္ျပပါ
freelist စတိုး 634 111.45k
Blockchain Wallet. Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Blockchain Wallet. Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 6.24.0
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://blockchain.info/privacy
Release date: 2019-05-22 04:05:34
လက်မှတ် SHA1: 3A:F1:29:A6:D0:E2:6D:8A:15:E2:50:58:26:56:97:10:D9:91:86:A1
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Ben Reeves
အဖွဲ့အစည်း (O): Qkos Services Ltd
နယ်မြေ (L): York
Blockchain Wallet. Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ